Sababo la iswaafaqla'aan qaar ka mid ah, fayrusyada ama incompatibilities, waxay u badan tahay in aad iPhone Xayiraadda laga yaabaa joojinayso shaqada. Qaybtani waxay ka qabanayaa sida badan sabab ka waxayna sharxaysaa sida loo xaliyo arrinta si joogto ah.
Sababaha keenida qaboojiyay iPhone a
Qaar ka mid ah sababaha ugu badan ee caadi ahaan ka masuul ah debcinta iPhone ah waa ka mid ah:
• Older Operating System (macruufka) - Tan iyo markii la filayaa in aad qori doonaa qorshaha xogta Internet fiican ah in ay sii wadayaan taageerada aad iPhone ku xiran internetka, ee Chine iyo website-yada isticmaala farsamada ugu dambeeyay waxaa laga yaabaa in aynan version wayn ee macruufka ah rakibay on your iPhone. Sababtoo ah incompatibilities sida, aad iPhone oo hadda ka dibna Xayiraadda laga yaabaa in kasta.
• A ka qaldan yihiin ama ku kharribeen App / Widget - Your iPhone iyagoo qalab casri ah oo MFT digital majorly tiirsan ee Chine iyo widgets in aad ka soo dejisan iyo rakibi ku yaal. Inkasta oo ay si xoogan u la soo jeediyey in aad soo dajiyo barnaamij ka ilaha aad ku kalsoon tahay sida Apple App Store, mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale doonaynaa in aan u soo dajiyo ka ah isha dhinac saddexaad aan rasmi ahayn, tusaale ahaan saaxiibkaa. Haddii lagu rakibay app / widget kasta oo kale ma aha ilaa sumadda ama waa khaldan, aad iPhone Xayiraadda laga yaabaa in mar kasta oo aad isku dayaan in ay abuurtaan barnaamijka.
• Low Gudaha Memory - Haddii aad ku kaydsan aad u tiro badan videos, kuwan raadkaygay audio ama images in lagu kaydiyo gudaha iPhone iyo waxaa jira meel bannaan oo ku filan u lahayn in taleefanka si ay u ha neefta si sax ah, waxaa si joogto ah Xayiraadda laga yaabaa.
• xiran Computer Virus-ka cudurka - dhibaato Tani inta badan waxay dhacdaa marka aad ku xidhi aad iPhone in PC Windows ah via cable USB ah. Tan iyo Windows ka hawlgala nidaamyada u sii nugul yihiin in ay weerar virus, iPhone ah ku xiran computer noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa in Xayiraadda waqti ka waqti.
• kulayl - Your iPhone Xayiraadda laga yaabaa in sida ugu dhaqsiyaha badan uu soo gaadho heerkulka marinka. IPhone An laga yaabaa in aad u hesho kulaylku markuu la kulmin u durations dheer in heerkulka aad u sarayso marka aad isticmaalayso, ama waxaa la isticmaalaa marka hoos meel daboolan (sida gudaha buste) muddo dheer.
Si loo xaliyo qaboojiyay iPhone ah, si fudud u aad la bilaabi kara. Xaaladdan oo button hurdada / Wake waxay ku fashilantay inay initialize habka reboot ee telefoonka, fulinaya dib jilicsan si fiican ugu adeegi lahaa ujeedada. Waxaad jilicsan dib kartaa iPhone adigoo raacaya tilmaamaha hoos ku siiyo:
Press iyo qaban badhamada hurdada / Wake oo Home isku mar 10-15 ilbiriqsi.
Sug ilaa logo Apple u muuqataa shaashadda.
Ka dib markii logo u muuqataa, sii daayo badhannada.
Sug ilaa la xirey kadibna iPhone aad.
Bilaw isticmaalka telefoonka caadiga ah.
Marka laga reebo keeno taageero aad qaboojiyay iPhone ilaa iyo ordaya, waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale doonayaa in la baabi'iyo sababaha ay mas'uul ka tagay telefoonka ku jira xaalad ah la qaboojiyey in meesha ugu horeysa waa. Waxaad sidaas samayn kartaa adigoo raacaya taallaabooyinka hoos ku qeexan:
Xalka u waaweyn Version of macruufka:
Power on your iPhone ama ha guuleysatey ka gaareen dib jilicsan.
Hubi in ay la xidhiidho la Internet Wi-Fi.
Fiiro gaar ah: Isticmaalka xogta mobile in la gaarsiiyo macruufka ee hadda jira waxaa laga yaabaa in waqti qaadato oo qaali ah.
Laga soo bilaabo screen Home ku, u tag Settings > General > Software Update .
Laga soo bilaabo Update Software screen, riix Download iyo rakib doorasho.
Raac tilmaamaha ku-shaashadda si ay u dhamaystiraan macruufka habka hagaajinta.
Xalka u qaldan yihiin ama musuq App / Widget:
On screen Home ah, ka jaftaa iyo qaban app kasta ama widget ilaa dhan ah astaanta bilaabi ruxaya.
Hel app / widget khaldan iyo ka jaftaa X calaamad ka dhanka top-bidix.
Fiiro gaar ah: Waxaad ogaan kartaa haddii app ah waa khaldan marka iPhone fariisiyo mar kasta oo aad isku daydo in aan bilowno app.
On sanduuqa xaqiijin bandhigay, tuubada Delete doorasho si meesha looga saaro app khaldan ka iPhone.
Xalka u Low Gudaha Memory:
Laga soo bilaabo screen Home ku, tuubada Photos icon.
On suuqa kala furay, si loo hubiyo in ay Qaasaali doorasho laga soo doorto geeska midig hoose.
Laga soo bilaabo Qaasaali interface, ka jaftaa folder ku haboon ka meesha aad rabto in meesha laga saaro tiirarkii.
Marka aad gashid gudaha weelka, ka jaftaa Select dhankiisii ​​top-xaq.
Tubada in ay doortaan sanamyadii aad rabto in aad tirtirto.
Marka la doortay, ka jaftaa icon Delete ah (icon la calaamad trashcan) dhankiisii ​​midig ugu hooseysa interface ah in meesha laga saaro oo sanamyada la isticmaalin.
Raac habka la mid ah si loo saaro videos aan la isticmaalin ka iPhone ka dib markii laga faaiidaysanayo ka Videos icon ka screen Home ah.
Xalka u xiran Computer Virus-caabuqan ah:
Gal aad Windows PC la account maamulka.
Haddii loo maleeyo in aad horey u barnaamij antivirus xoog lagu rakibay on your computer, riix Windows Explorer icon (Windows 7) ama File Explorer icon (in Windows 8) ka toolbar ah la bilaabay deg deg ah.
Mar haddii la furo, ka Murayaad navigation dhanka bidix ee ah, xaq-riix Local digsi (C :) drive.
Laga soo bilaabo menu macnaha guud, dooranayaan ku habboon in iskaan drive la antivirus ay ku rakiban yihiin.
Sug ilaa habka iskaanka u dhameystiray ka dibna talaabo ku haboon ka qaadi si loo saaro fayrusyada ogaado.
Marka taasi la sameeyo, xiriiriyaan iPhone in PC iyo bilaaban waxaa sida caadiga ah la isticmaalayo.
Xalka u kululaado
Haddii aad iPhone waa la qaboojiyey ay sabab u tahay kulayl, uma baahnid inaad sameyso wax iyo telefoonka wuxuu la iman doonaa si caadi ah iyo si toos ah u bilaabi doonto ka shaqeynta sida ugu dhakhsaha badan u soo qaboobeyso.
Waxa intaa dheer in arrimaha kor ku xusan, waxaa jiri kara dad badan oo dheeraad ah. Aad Xaaladdan oo aadan hubin ku saabsan dhibka iyo / ama aadan farsamo war sida loo xaliyo arrimaha, waa in aad tagtaa a Apple Service Center ee kuugu dhow ama Idman Apple Tafaariiqda Store iyo aad u hesho dhibaatada cudurka iyo xalin farsamayaqaan ah adeeg idman.
> Resource > iPhone > Sida loo dayactir la qaboojiyay iPhone a